Nhoroondo yekambani - Tianjin Yakanyanya Kuwana Sayenzi & Technology Co., Ltd.
Tianjin Yakanyanya Kuwana Sayenzi & Technology Co., Ltd. (CHINA BGT) indasitiri uye yezvokutengeserana chikamu chiri kuita mukugadzira nekubuditsa michina yepamusoro yekemikari. CHINA BGT yakagadzwa mugore ra2000. Zvigadzirwa zvikuru ndezvekujekesa mumiririri, imwe inomiririra majeneti uye zvinowedzerwa zvekudzokorora mapurasitiki ayo akatumirwa kunyika zhinji dzeSouth East Asia, Middle East neEurope kweanenge makore makumi maviri aine zvakanaka uye akatsiga mhando.
CHINA BGT inogona kupa yakazara yakazara yeiyo nucleating mumiririri, senge yekujekesa mumiriri, nucleating mumiriri yekuwedzera kuomarara uye β-Crystal nucleating mumiriri. Izvi zvigadzirwa zvinogona kushandiswa muPP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM uye TPU nezvimwe. CHINA BGT zvakare inogona centralized kugovera akasiyana ekuwedzera ekugadzirisa ekugadzirisa zvigadzirwa zvepurasitiki, senge Odor Remover, Ink Remover, Sticker Remover, Flavoring Agent nezvimwewo kubatsira vashandisi kuponesa mutengo uye kuita yakawanda purofiti mukugadzira. CHINA BGT zvakare inogona centralized kugovera akasiyana ekuwedzera ekugadzirisa ekugadzirisa zvigadzirwa zvepurasitiki, senge Odor Remover, Ink Remover, Sticker Remover, Flavoring Agent nezvimwewo kubatsira vashandisi kuponesa mutengo uye kuita yakawanda purofiti mukugadzira.
VIRTUE NDEYEKUTANGA Uye purofiti ICHOKWADI. Aya ndiwo mazano edu anotungamira mubhizinesi.
Kuve wepamusoro tekinoroji, BGT zvigadzirwa zvine hunhu hwekujeka kwepamusoro, hapana chepfu, hapana hwema uye hwapfuura "Kudya Kwekuchengetedza & Toxicity Bvunzo" uye RoHS bvunzo neSGS. Zvigadzirwa inogona kuiswa mukudyidzana kwechikafu. China BGT ichave yakazvipira kusimudzira kushandira pamwe kwepedyo uye kwenguva refu nemamwe mafemu ari kunze kwenyika uye epamba, zvichibva pane kwedu tekinoroji kugadzira. China BGT ichapa kune vatengi vedu nezvakanaka zvigadzirwa kwete chete, asi zvakare neyakagadzikana mhando, kutendeseka pamwe nebasa riri nani. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanyira webhusaiti yedu: www.mgbany.com uye www.mundemestete.com kana kungotibata nesu kuburikidza neemail box sezvakanyorwa muwebhusaiti